I-LG isungula iiSandi zeBars ngo-2021 ngeNkxaso eDityanisiweyo ye-AirPlay 2 | Ndisuka mac
Umvelisi waseKorea u-LG usenokungazi ukuba zenziwa njani iifowuni eziphathwayo okanye ubuncinci ayizizo ezithandwa ngabasebenzisi, kodwa ngokwesandi kunye noomabonakude kuthatha ikhekhe. Ne uhlaziyo lwesixhobo se2018 iyahambelana ne-AirPlay 2 kunye neenguqulelo ezintsha esinemarike egutyungelweyo ukuba sifuna ukonwabela konke okusemgangathweni we-Apple kunye nomgangatho womfanekiso. Sasilela isandi kunye ne imivalo yesandi esitsha loo msantsa ugqunyiwe.
Umvelisi wekhompyutha waseKorea umenzi we-LG usungule umgca wee-soundbars ze-2021 ngenkxaso eyakhelweyo ye-AirPlay 2, itekhnoloji ye-Apple yesixhobo sokuhambisa imithombo yeendaba. Ngokwengxelo kwi LG iwebhusayithi, imivalo yesandi esitsha inikezela nge amava e-premium audio kunye nolawulo olululo Kunye nokupakishwa kwe-eco-abazi kunye noyilo.
Uluhlu olutsha lubonelela ngesandi esikumgangatho ophezulu, Unxibelelwano olulula, Ukusebenza kwe-Smart kunye ne-aesthetics ecekeceke ngenkangeleko yanamhlanje eyilelwe ukuxhasa iiTV ze-LG kwaye isebenza kakuhle nangayo nayiphi na imihombiso.
Umgca 2021 ngu iyahambelana noSiri kulawulo lwelizwi kunye nokudlala okungenazandla. Nge-AirPlay 2, abathengi be-Apple banokuhambisa, ukulawula kunye nokwabelana ngomculo abawuthandayo kunye nomnye umxholo ngokuthe ngqo kwi-iPhone yabo, i-iPad okanye iMac.Ukongeza, imivalo yesandi esitsha iyahambelana nomsebenzi weAI Sound Pro weLG TV. Ezi bhari zesandi zibandakanya inkxaso yeDolby Atmos kunye ne-DTS: X iifomathi zomsindo ezijikeleze, inkxaso yeDolby Vision ngokudlula kwi-4K, iMeridian Audio tuning, kunye netekhnoloji yeMeridian Horizon yamva nje.
Ngendlela, ezinye yeemodeli zii-Hi-Res Audio eziqinisekisiweyo ukudlala i-24-bit / 96 kHz yokudlala. Akukho nto. Eyona ilungileyo inokumanyaniswa neyona ibalaseleyo.
Umendo opheleleyo kwinqaku: Ndisuka mac » iapile » Ezahlukeneyo » I-LG isungula ii-soundbars ngo-2021 ngenkxaso eyakhelweyo ye-AirPlay 2